Izindlela ezi-5 zokuhlela iqoqo lakho lezincwadi | Bezzia
Labo bethu abathanda ukufunda bavame ukubhala phansi izihloko ezisalindile ukuze bazifunde ohlwini. Uhlu olukhula ngezinga elihlasimulisayo esingenakukwazi ukubhekana nalo. Asizithengi zonke izihloko ezisohlwini, kude nalo, kepha sigcina sesiqongelela ekhaya a iqoqo elibalulekile lezincwadi okudingeka uhlele ngandlela thile.
Yiba nomtapo wolwazi lapho ukwazi ukubeka khona konke iphupho labaningi. Iqiniso, nokho, liyasiphoqa ukuthi silisabalalise emakamelweni ahlukene. Noma kunjalo gcina ukuhleleka eqoqweni lethu Kungenzeka ngokusebenzisa eyodwa yamafomula amahlanu esiwaphakamisayo namuhla. Sizoqala?
Izincwadi zivame ukuba nezikhala ezifanele emakhaya ethu, yingakho kwabaningi kubaluleke kakhulu ukuthi indlela yokuzihlela iphendule kuzo zombili izindlela zokuzijabulisa nezobuhle. Ukujoyina lokhu kunzima kepha akunakwenzeka. Noma iyiphi indlela okhetha ukuyenza, lesi isincomo sethu sokuqala: gcina ishalofu kufayela le- indawo encomekayo yezincwadi ezisanda kufika, lezo ongazifundanga.
Lapho izinhlobo ezahlukahlukene zidliwe ekhaya (ama-eseyi, izinganekwane, imibhalo elandelwayo, imemori, imidlalo yaseshashalazini, izinkondlo), ukuhlela izincwadi ngokwalo mbandela kuhlale kuyindlela yokwenza. Uma sekuhlukaniswe ngohlobo, ngokungeziwe, uma inani lamavolumu liphana, ungahlala usebenzise kamuva ukuwahlela ngokulandelana kwama-alfabhethi noma ngokuhlela. Izindlela ezimbili zokuzihlela ngezinzuzo nezinkinga zazo ezihambisanayo.
Ukuhlunga umtapo wezincwadi ngama-alfabhethi kusengenye yezinketho ezithandwa kakhulu. Ngabe ufunda ikakhulukazi izinganekwane? Uma kukhona uhlobo oluvelele eqoqweni lakho lezincwadi, ungakuhlela lokhu esitolo esikhulu sezincwadi kucatshangelwa ukuqala kwegama lesibongo labalobi. Ngaleyo ndlela ungathola kalula izincwadi zombhali wakho omthandayo.
Ingabe ukuthola kunzima ukukhumbula izihloko nabalobi bemisebenzi oyifundayo? Uma, njengami, izinyanga ezimbili ngemuva kokuzifunda, kunzima kuwe ukuthi ukhumbule nokuphikisana, lokhu kungahle kungabi yindlela engcono kakhulu kuwe. Esimweni sakho nakwami, indlela ebonakalayo ingasebenza kakhulu.
Uma ungazikhumbuli izihloko noma ababhali kepha uma ungazikhumbuli izici zobuhle zencwadi njengokuqina, umbala womgogodla noma isembozo, izindlela eziningi zokubuka ezingaba usizo olukhulu. Ukuzihlunga ngomshicileli, isibonelo, kungakusiza ukuthi uthole incwadi ngokushesha.
Ezimweni eziningi, kulula ukubona ukuthi incwadi ingowakuphi umshicileli ngokubheka umgogodla kuphela. Kuyisici kakhulu, isibonelo, okubomvu kwamaqoqo ePeriférica. Futhi imivimbo esawolintshi noma ebomvu emgogodleni omnyama wendlu yokushicilela ye-Acantilado noma ilogo yeqoqo le-Anagrama.
Le ndlela, ngaphezu kokusebenza, isivumela ukuthi sihlele umtapo wolwazi ukuze izincwadi ezinezici ezifanayo zihlangane. Umkhuba osinikeza i- umbono ohlelekile futhi okhangayongokuvamile kusuka kulabhulali yethu.
Indlela nge Ubukhona obuningi njengamanje ku-Instagram, inethiwekhi lapho konke kubonakala kunakekelwa ngokubonakalayo, ukuhlela izincwadi ngombala. Kuyasiza? Uma, njengami, unenkumbulo engaguquguquki, kungaba inqobo nje uma iqoqo lezincwadi lincane kakhulu.
Asikwazi ukukuziba ukuthi izincwadi ezinemiqolo emnyama nemhlophe yizo eziningi. Kuyiqiniso ukuthi kunabashicileli abaningi ngokwengeziwe, ikakhulukazi abasha kanye / noma abazimele, ababheja ngombala kodwa akuvamile ukuthola, ngokwesibonelo, izincwadi ezinama-slimes ansomi noma aluhlaza, ukunikeza izibonelo ezimbalwa. Ngakho-ke uma ukubuka kwesitolo sakho sezincwadi izoba yinhle kodwa mhlawumbe ingalingani futhi ngeke kube nokuningi ongakwenza ngakho.
Uyithandile le ncwadi? Ungayincoma kothile? Umuzwa wokuthi umuntu unawo ngokufunda okuthile ukuthi kufanele uyibuyise kangakanani kulabhulali ingaba yindlela yokuhlukanisa evumelekile njengaleyo eyedlule. Kungani ungahleli izincwadi zakho ngezigaba ezintathu? Labo obathandile noma abakufunde kwabo kukumake ngakolunye uhlangothi. Ngakolunye, lezo ozijabulele kepha zingancoma kuphela abantu abathile. Ekugcineni, lezo ongazithandanga futhi okungenzeka ukuthi uzithengise noma uzinike othile ongazijabulela.
Ngabe usebenzisa noma iyiphi indlela yokuhlela ukuhlela iqoqo lakho lezincwadi?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Izindlela ezi-5 zokuhlela ukuqoqwa kwencwadi yakho